Isikhululo seenqwelomoya saseFrankfurt sisebenzisa ama-87 eekhiyoski ze-TS6 zebhayometriki zamva nje
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » Isikhululo seenqwelomoya saseFrankfurt sisebenzisa ama-87 eekhiyoski ze-TS6 zebhayometriki zamva nje
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Technology • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Isikhululo seenqwelomoya saseFrankfurt sisebenzisa ama-87 eekhiyoski ze-TS6 zebhayometriki zamva nje.
Isikhululo seenqwelomoya saseFrankfurt siphumeza ama-87 ee-SITA ze-TS6 Kiosks zakutsha nje kwiSitena soku-1 nesi-2 ukuphucula amava abakhweli.
I-SITA ye-biometric-enabled kiosks kunye neenkonzo zemiyalezo yemithwalo ziguqula isikhululo seenqwelomoya saseFrankfurt.
I-SITA's TS6 check-in kiosks ivumela abakhweli ukuba bangene ngokukhawuleza kwaye bafumane iithegi zebhegi zeenkonzo zokuzilahla kamva.
Iikhiyoski zisebenza ngekonsathi ne-SITA Flex kwaye zinika abakhweli amava amanyeneyo omsebenzisi kuzo zonke iinqwelo-moya ezininzi.
I-SITA, umboneleli wetekhnoloji kwishishini lezothutho lomoya, ubhengeze ukuhanjiswa kwetekhnoloji enkulu kwi Isikhululo senqwelomoya saseFrankfurt ukwandisa amava abakhweli kunye nokwandisa ukusebenza kakuhle kwesikhululo seenqwelomoya. Ukusasazwa komsebenzi kubandakanya ukufakela iiKiosks ze-SITA TS87 ezisebenza ngebhayometrikhi ezingama-6 kwaye kulindeleke ukuba zigqitywe ekupheleni kwalo nyaka.
ISITA's TS6 eziguquguqukayo zokungena kwiikhiyoski zivumela abakhweli ukuba bajonge ngokukhawuleza kwaye bafumane iithegi zengxowa yeenkonzo zokulahla ibhegi yamva. Iivenkile zisebenza ngekonsathi kunye ISITA I-Flex kwaye inike abakhweli amava amanyeneyo omsebenzisi kuzo zonke iinqwelomoya ezininzi, ukonyusa ukulula kokusetyenziswa ngelixa unciphisa iindawo zokuchukumisa zomzimba.
Abakhweli bahlala kulawulo lweendlela zabo zokuzenzela iinkonzo, ukusuka ekungeneni ukuya ekuzikhupheni kwebhegi ngokudlula kwikhiyoski enebhayometriki ene-intuitive. Entsha ISITA Ikiosk ye-TS6 iye yaphumelela ibhaso loYilo lowama-2021 loyilo olutyibilikayo, oluzinzileyo, noluguquguqukayo, olunokwenziwa ngokwezifiso ukuze luhambelane noyilo lophawu lwesikhululo seenqwelomoya kunye neemfuno ezithile zabathengi. Uyilo lweemodyuli lukwathetha ukuba uphuculo kunye nohlengahlengiso lunokwenziwa ngaphandle kokutshintsha indawo ye-kiosk yonke, kuzisa ukongezwa kweendleko kunye neenzuzo zozinzo.
I-SITA's TS6 Kiosk ingasetyenziselwa ukukhangela ngaphakathi kunye nebhegi yokufaka ithegi ivula indlela yokungachukumisi ngokupheleleyo, uhambo lomkhweli ohambahambayo. Ukusasazwa kwisikhululo seenqwelomoya saseFrankfurt kubonisa ukuphunyezwa okukhulu kwe-SITA eYurophu.
UGqr. Pierre-Dominique Prümm, uMlawuli weSigqeba sezoPhapho kunye neZiseko zoPhuhliso Fraport, uthe: “Ukubonelela abakhweli ngeendlela ezintsha, ezikhuselekileyo, kunye nezikrelekrele zokuhamba ngelixa sikwaqinisekisa ukuba sinokomelela kwaye sisebenza ngokufanelekileyo kwisikhululo seenqwelomoya kubalulekile njengoko imboni yethu ibuyela kwimpembelelo yobhubhane. I-SITA iyasixhasa ekuphumezeni eli bhongo, kwaye sijonge phambili ekwamkeleni abakhweli abaninzi ababuyela esibhakabhakeni.”
USergio Colella, uMongameli, iYurophu, iSITA, uthe: “Siyazingca ngokuqhubeka nokuxhasa izikhululo zeenqwelomoya ezikhokelayo njengeFrankfurt ekuchacheni kwabo kwimpembelelo yobhubhane. Itekhnoloji ibambe izitshixo zokuvula uhambo olukrelekrele kunye nolukhuselekileyo kubo bonke, ukubuyisela imali elahlekileyo kwiinyanga ezili-18 ezidlulileyo, kunye nokuqinisekisa imisebenzi eguquguqukayo enokuziqhelanisa neemeko ezingalindelekanga zangomso. Ishishini lezothutho lomoya elomeleleyo nelizinzileyo liya kunceda abakhweli, uqoqosho kunye nemisebenzi. ”